Gätenborg Dhaqtar Shaqada looga eryay Sameynta Shahaado been abuur ah oo Corona ah Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaGätenborg Dhaqtar Shaqada looga eryay Sameynta Shahaado been abuur ah oo Corona ah
Gätenborg Dhaqtar Shaqada looga eryay Sameynta Shahaado been abuur ah oo Corona ah
January 28, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Dhaqtar ka tirsan dhaqaatiirta Goteborg ayaa laga ceyriyay shaqadii uu ka hayay Isbitaalka Södra Älvsborgs, ka dib markii lagu eedeeyay inuu soo saaray shahaadooyin been abuur ah oo coronavirus ah xarun caafimaad oo kale oo uu ka shaqeeyo.
“Waxaan sameynay qiimeyn dhameystiran waxaana gaarnay in shaqsigan uusan sii wadan karin shaqadiisa,” ayay tiri Agaasimaha howlgalada Karen Heddersterna.
Waxayna u aragtay in kalsoonida dhakhtarkaas la gilgilay, gaar ahaan maadaama uusan ku wargalin maamulka isbitaalka inuu ka shaqeeyo xarun caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ay barbar socdaan shaqadiisa isbitaalka kor ku xusan.
Intaa waxaa dheer, kormeeraha daryeelka caafimaadku wuxuu ku eedeeyay rugta caafimaad ee dhakhtarku ka shaqeeyo inay khatar gelinayso nabadgelyada bukaanka iyo dadka kale, sida uu sheegay Utbury-Posten.
Booliska iyo Ivo Care Inspectorate ayaa sidoo kale baaraya howlaha rugta caafimaad.
Jimcihii, ayaa la soo saaray go’aan looga baahan yahay bukaan socod eegtada in ay si dhakhso leh u joojiso “bixinta shahaadooyinka la xiriira natiijooyinka tijaabada PCR iyada oo aan marka hore la samayn falanqeyn muunad ah oo aan laga helin natiijooyinka baaritaanka qoraalka ah shaybaar la aqoonsan yahay